Wararkii ugu danbeeyay ee xaalada doorashooyinka Soomaaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wararkii ugu danbeeyay ee xaalada doorashooyinka Soomaaliya
Beesha caalamka kulankii ay maanta layeesheen R-wasaaraha Xukuumadda siihaysa xilka Md, Rooble ayaa umuuqday mid cadaadis lagu saarayo inay dawr muhiim ah ku yeelato dadaalada socda ee dhanka doorashooyinka.
Wakiilada beesha caalamka ayaa kulanka kaga qayb qaadanayay aalada fogaan araga ayaa ku bogaadiyay Rooble heshiiskii uu la gaaray midawga musharixiinta, waxay sidoo kale ku dhiiri geliyeen inuu heshiis la gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan maamulada jubaland iyo puntland.
Beesha caalamku waxay ka sugayaan in Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Farmaajo uu soo saaro warqad aad udhimi doonta awoodihiisa maadama mudo xileedkiisa sharciga uu ku ekaa 8feb. taasoo fududeyn doonta in Rooble uu awood uyeesho go’aamo badan uusan hada samayn karin, waxayna wax kaqaban doonta xal in loo helo shuruudaha ka imaanaya maamulada qaarkood iyo midawga musharixiinta.
Saddex qodob ayaa ugu muhiimsan shuruudaha ay soo gudbiyeen Jubaland iyo Puntland,
1:waxey doonayaan in beesha caalamka ay damaanad qaado fulinta waxa kasoo baxa shirka.
2: in shirku ka dhaco meel dhex-dhexaad ah. 3:in shirka laga qeyb galiyo musharaaxiinta mucaaradka, waana qodobo uu markii hore diidanaa FARMAAJO.
Beesha caalamka waxey Rooble ku cadaadiyeen inuu qaato doorka nabadeynta, waxaana la sugayaa shaacinta shir ka dhici doona Xalane.
Shirka lagu wado inuu xalane ka dhaco ayaa la filayaa inuusan ka qeyb galin FARMAAJO, waxaana ku matali doona Rooble.
Hadaba dhinacyada oo dhan waxaa ka muuqata inay ku qanacsan yihiin in hawsha dhiman uu dawrkiisa kaqaato RW Rooble maadaama Farmaajo ay ka fashilantay riyadii uu ku doonayay in doorashada lagu shubto.
Previous articleCiidamada amaanka iyo banaanbaxayaal iskaga hor imaaday Myanmar..
Next articleMarkab Israail leedahay ee Gacanka Omaan Badda lagu qarxiyey oo Gaaray Dubay
Ilhan Cumar “ Maamulka Biden waa inuu sharaxaad ka bixiyaa duqaymaha...
lhaan Cumar, oo gobolka Minnesota u matasha Aqalka Wakiillada Mareykanka (Congress), ayaa maamulka Biden ka dalbatay qiil u helida duqeyntii Talaadadii ay ka geysteen...
Heesaa u dhashay Nigerian ah oo loo xirey aflagaado la sheegay...